Thursday October 02, 2008 - 19:25:59 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Adduunyadu waa dhalanteed, waxwalba waa lagu arkaa oo aan aheeyn Illaah Wajigiisa sharafka badan. Hadii Illaah ku itixaamo dhibkaaga ma yaro, tusaale xun lagaaga dhigo bulshada weeynta inteeda kale, waa magac la'aan, murugo, dhib iyo kadeed maskaxadeed. Sida aan iri Adduunyado waa dhalanteed, Dadkuna waa laba wajiilayaal, waxeeyna intooda badan qabaan waji ay qof fiican iskaga dhigaa, iyo mid ku qarsoonsan wajigooda caadiga ah gadaashiisa oo ay dadku ku cadaabaan, nolosha kaga ridaan, ku aasaan ayagoo nool, kana faiideeystaan jaaniska ay heeystaan maantay oo aan marnaba birito sugin ee digtoonaaw!
' Waa la is fiirshay, qosol ayaa mar labaad lagu dhuftay, inkastoo ay wiilka iyo waalidiintiisaba ay foorjo ka wadaan. Hadane Maariya inta xanaaqday ayeey qolkeedii horay u gashay ayadoonan u jawaabin. Riyadii macaaneed ayeeyba ka qaseen, maantay nin ay la so hadashay hadii ay aqoon u lahaan lahaayiin meey warkaas sheegi lahaayeen ayeey istiri. Maariyo feker iyo riyo ayeey gashay, midba mid ka sii macaan u dhiibtay, is tustay in qofka ay maantay la soo sheekeeysatay mustaqbalkeeda wax ka bedeli doono si uu kaga bedelaba…. La soco qaybt so socota!